EPRP အဓိကဖော်ပြသောအရာများ Archives - EPRP ၀က်ဆိုဒ်တည်ဆောက် ပြုပြင်ဖန်တီးမ
You are at:Home»Category: "EPRP အဓိကဖော်ပြသောအရာများ"
Browsing: EPRP အဓိကဖော်ပြသောအရာများ
မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် Facebook အကောင့် ပြုလုပ်နည်းနှင့် အကောင့်လုံခြုံရေးအတွက် မိမိအသုံးပြုလိုသည့်အတိုင်း ပြင်ဆင်ပုံကို အီးပီအာပီကထုတ်လုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။ [၄:၅၆], နေ့စွဲ ။ ။ ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာတွင် လွှင့်တင်သည်။ မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖော်ပြပြီး အသံဖိုင်မပါဝင်ပါ။
ကွန်ပျူတာဖြင့် Facebook အကောင့် ပြုလုပ်နည်းနှင့် အကောင့်လုံခြုံရေးအတွက် မိမိအသုံးပြုလိုသည့်အတိုင်း ပြင်ဆင်ပုံကို အီးပီအာပီကထုတ်လုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။ [၄:၃၈], နေ့စွဲ ။ ။ ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာတွင် လွှင့်တင်သည်။ မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖော်ပြပြီး အသံဖိုင်မပါဝင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တိုင်းရင်းသား ဒေသများ၏ ဝေးလံခေါင်သီသော နေရာများမှ သာမန်လူသားများ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အတွက် ပြောဆိုနိုင်ရန် အခွင့်အရေး တစ်ခု ဖန်တီးပေးရန် ဖြစ်သည်။ လူအများကြား ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အသံကို များစွာကြားရလေ့မရှိဟု ယူဆသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဘဝပေးအခြေအနေများအပေါ် တက်နိုင်သမျှ ပဓာန ထားလိုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒေသခံများကို စုစည်းရာတွင် တက်နိုင်သမျှ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်နိုင်သမျှ ပါဝင်ရန် အားပေးခဲ့ရပြီး ယင်းတို့အား အခြေခံ “ နားထောင်ခြင်း” သင်တန်း(တိုင်းရင်းသား ငြိမ်းချမ်းရေး အရင်းအမြစ် စီမံချက် နားထောင်ခြင်း လက်စွဲ ရှု)နှင့် ဒီဂျစ်တယ် အသံသွင်းစက်ငယ်များ ပေးပြီး “ ဘဝ ဇာတ်ကြောင်းများ” စုဆောင်းပေးရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် မေးခွန်းမေးသူများ ကြားရသည့်အတိုင်း ဇာတ်ကြောင်းကို ပြောပြနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းထားသဖြင့် စာဖတ်သူများအနေဖြင့် ဖော်ပြထားသော ဇာတ်ကြောင်းများ အပေါ် ကိုယ်ချင်းစာ စာနာသနားနိုင်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ English version here
ကရင်ပြည်နယ် မြေယာပြဿနာရပ်များဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ
ကရင်ပြည်နယ်အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းတွင်ဖြစ်ပွားနေသောမြေယာကိစ္စရပ်များဖြေရှင်းရေးသည် ရွေးကောက်ခံအစိုးရသစ်အတွက် အကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်ချက်တခုထဲတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ထိုပြဿနာရပ်များကိုကြိုးစားဖြေရှင်းရေးသည် အစိုးရ၏တာဝန်ဖြစ်ပြီး ဖြေရှင်းနိူင်ရေးအတွက် အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူလက်တွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် လွန်စွာအထောက်အကူ ဖြစ်နိူင်ပါသည်။ “ ဇွဲကပင်ကိုသက်သေတည်၍ “ အစီရင်ခံစာ ( မြန်မာဘာသာ) သည် နိုင်ငံရှိမြေယာပြဿနာများအား အစိုးရသစ်ကဖြေရှင်းရာတွင် အထောက်အကူပြုစေမည့် ကရင်အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများကပြုစု ထားသော အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ဖြစ်ပါသည်။
Google Drive တွင် မိမိ Android ဖုန်းမှ ဖိုင်များ သိမ်းဆည်းပုံ
ဒီဇငျဘာ 9, 2016 EPRP
မိမိဖုန်း ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ခဲ့ပါက မိမိ၏အချက်အလက်များ Google Drive တွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီးAndroid Phone မှ ဖိုင်များ၊ ဓါတ်ပုံများ စသည်ဖြင့် မိမိ၏ အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းပုံကို အီးပီအာပီကထုတ်လုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။ [2:58], နေ့စွဲ ။ ။ ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာတွင် လွှင့်တင်သည်။ မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖော်ပြပြီး အသံဖိုင်မပါဝင်ပါ။
ဒီဇငျဘာ 7, 2016 Dr Alan Smith, FLD/EPRP
ဤရှင်းလင်းတင်ပြချက်သည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာနယ်နမိတ်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခြင်းတွင် လက်ခံကျေနပ်နိုင်ပြီး မြဲမြံသည့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် အခြေခံတကျ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရာ၌ ကိုးကား နိုင်မည့် အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတွင် လက်နက်ကိုင်တပ်များ၏ နေရာများအား နယ်နမိတ်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ တပ်ဖွဲ့များ၏ နေရာများအား သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ထိုအခြေအနေအောက်တွင် မတော်တဆ ထိတွေ့ရင်ဆိုင်မှုများ မရှိစေရေးအတွက် လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ ရှင်းလင်းတင်ပြချက် (ကရင်ဘာသာ) အား ဤနေရာတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်တ၀ှမ်း မြေယာသိမ်းယူမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ EPRP အစီရင်ခံချက်
နိုဝငျဘာ 14, 2016 EPRP
EPRP သည် ၂၀၁၆ အတွင်းတောင်ကြီးမြို့တွင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သင်တန်း ၂ ခုဖွင့်လှစ်သင်တန်းပေးခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းများနှင့်လက်တွဲ၍ မြေယာဆိုင်ရာဗဟုသုတမျှဝေရေးဆွေးနွေးပွဲများ ၊ရှမ်းပြည်နယ်ရှိမြို့နယ် ၁၈ မြို့နယ်မှမြေယာသိမ်းပိုက်ခံရမှုများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းခဲ့ကြပါသည်။ အစီရင်ခံချက်အပြည့်အစုံသို့
၀က်ဆိုဒ် စာမျက်နှာများနှင့်အရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုရန်အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း
နိုဝငျဘာ 5, 2016 EPRP
Internet connection ကို မပြောင်းလဲဘဲ ကွန်ပျူတာနှင့် ၀က်ဆိုဒ် စာမျက်နှာများ အရှိန်မြှင့်တင် အသုံးပြုနည်း အင်္ကြပေးချက်များကို အီးပီအာပီကထုတ်လုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။ [3:35] နေ့စွဲ ။ ။ ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာတွင် လွှင့်တင်သည်။ မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖော်ပြပြီး အသံဖိုင်မပါဝင်ပါ။
နိုဝငျဘာ 4, 2016 EPRP
နိုဝငျဘာ 2, 2016 Panglong
လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နိုင်ငံရေးပါတီများ တောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ မှ သျှမ်းပြည်အတွင်းရှိ သိမ်းဆည်းခံလယ်မြေပြသာနာများကို လက်ရှိ NLD အစိုးရမှ ကူညီဖြေရှင်းပေးရန် သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ရှိ မြို့တော်ခန်းမတွင် စာတမ်းမိတ်ဆက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံဖတ်ရန်
သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းမှ ကွန်ပျူတာသို့ကြိုးမဲ့အင်တာနက်ကို ချိတ်ဆက်သုံးစွဲနည်း
မိမိ စမတ်ဖုန်းဖြင့် ကွန်ပျူတာကို အင်တာနက် လွယ်ကူစွာချိတ်ဆက်အသုံးပြုပုံ နှစ်နည်းဖြစ်သော(Wifi Hotspot and Tethering)ကို ယခုဗီဒီယိုတွင် ရှင်းလင်းပြသထားပါသည်။ [4:46] နေ့စွဲ ။ ။ ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာတွင် လွှင့်တင်သည်။
ယခုဗီဒီယိုအား EPRP ကျားမဖြစ်တည်မှုသိရှိနားလည်ရေးပညာပေးလှုပ်ရှားမှု တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် EPRP ၏ရှမ်းပြည်နယ်ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေးမှုး နန်းကေစီကထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ EPRP ကျားမဖြစ်တည်မှုသိရှိနားလည်ရေးပညာပေးလှုပ်ရှားမှုအား ဒေါက်တာခင်မာမာကြည်၏စိတ်ကူးနှင့် လမ်းညွှန်မှုဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအသိုက်အမြုံ အသီးသီးမှအမျိုးသမီးများကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားမှုများပါဝင်သည်။အဆိုပါတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများကို ဗီဒီယိုဖိုင် ၂ ခုဖြင့်ပုံဖော်ခဲ့ဖူးပြီး ယခုနောက်ဆုံးဗီဒီယိုသည် ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းပေါင်းစုံကိုရွေးနှုတ်တင်ပြ ထားခြင်းဖြစ်သည်။ [22:54], စက်တင်ဘာတွင်လွှင့်တင်ပြီး မြန်မာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားပြောများကို အင်္ဂလိပ်စာတမ်းထိုးပါရှိသည်။
စကျတငျဘာ 14, 2016 EPRP
ဂျီမေးလ် အခြေခံ အကြောင်းအရာများ ခြုံငုံသုံးသပ်ထားသော စာရိုက်ခြင်း၊ ပူးတွဲစာပိုခြင်း၊ အကြောင်းပြန်စာပို့ခြင်း စသည်တို့နှင့်အတူ ဂျီမေးလ် အကောင့်တခုဖွင့်နည်းတို့ကို ယခုဗီဒီယိုတွင် ရှင်းလင်းပြသထားပါသည်။ [3:33], နေ့စွဲ ။ ။ ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာတွင် လွှင့်တင်သည်။
စကျတငျဘာ 9, 2016 EPRP
ဂျီမေးလ် အခြေခံ အကြောင်းအရာများ ခြုံငုံသုံးသပ်ထားသော စာရိုက်ခြင်း၊ ပူးတွဲစာပိုခြင်း၊ အကြောင်းပြန်စာပို့ခြင်း စသည်တို့နှင့်အတူ ဂျီမေးလ် အကောင့်တခုဖွင့်နည်းတို့ကို ယခုဗီဒီယိုတွင် ရှင်းလင်းပြသထားပါသည်။ [4:00], နေ့စွဲ ။ ။ ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာတွင် လွှင့်တင်သည်။
စကျတငျဘာ 7, 2016 EPRP
အုပ်ချုပ်ရေးဟူသည့်စကားရပ်မှာ ပါလီမန်စနစ်များရှိ ကက်ဘိနက်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် သမ္မတစနစ်များရှိ အုပ်ချုပ်ရေး ဟုလူအများနားလည်ထားသော အစိုးရဦးဆောင်မှုခက်မကို လွှမ်းခြုံဖော်ပြသည့် အသုံး အနှုန်းဖြစ်သည်။အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ဥပဒေများကိုအတည်ပြုခြင်း၊ငြင်းခုန်ဆွေးနွေးခြင်းမရှိသော် လည်း ဥပဒေကြမ်းပြုစုရာတွင် ဦးဆောင်ရလေ့ရှိသည်။ Other chapters of “Introduction to Politics”.
တရားစီရင်ရေးများသည် ဥပဒေများကိုကျင့်သုံးဖော်ဆောင်ရပြီး ၎င်းတို့ချမှတ်စီရင်မှုမှ ဥပဒေကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပေးရသည်။တရားစီရင်ရေးသည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းရမည်ဟု ယေဘူယျအားဖြင့်ယူဆထားကြသည်(ဆိုလိုသည်မှာ အစိးရခေါင်းဆောင်များ၏လွှမ်းမိုးမှုမှကင်းလွတ် ရမည်)။အမျိုးမျိုးသော ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာစနစ်များတွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိရန် အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများ ပါဝင်သည်။ယခုအခန်းတွင် အင်္ဂလိပ်ရိုးရာဥပဒေစနစ်(Common Law)၊တရားမဥပဒေစနစ် (Civil Law) များနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့အကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ Other chapters of “Introduction to Politics”.
၂၀၁၆ ဇူလိုင်လ ၁၂ မှ ၁၃ ထိ ကချင်ပြည်နယ်တွင် RANIR နှင့်အခြား CSO အဖွဲ့ဝင်များ(RANIR အောက်ရှိ)နှင့်အတူ EPRP နားထောင်ကြားနာရေးအဖွဲ့သည် ၂ ရက်ကြာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။မိမိတို့အသီးသီး၏ နာထောင်ကြားနာရေးစီမံချက်များအကြောင်း ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံ များကို အချင်းချင်း မျှဝေခဲ့ကြသည်။ Other “Listening Project” summary reports here.
ဇူလိုငျ 10, 2016 EPRP
ဥပဒေပြုရေးဆိုသည်မှာ ပါလီမာန်၊ကွန်ဂရက်၊chamber of deputies၊house of representatives၊ဆီးနိတ် စသည်ဖြင့် ပိုအသိများသော နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ကိုယ်စားပြုမှုအဖွဲ့အစည်းကို ခေါ်ဝေါ်သည့် အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ဥပဒေပြုလွှတ်တော်သည် ဥပဒေပြဌာန်းအတည်ပြုသည့် မဏ္ဍိုင်ဖြစ်သ Other chapters of “ Introduction to Politics” .
နိုင်ငံရေး မိတ်ဆက်နိဒါန်း ၁၁။ နိုင်ငံရေးပါတီများ
ဇူလိုငျ 6, 2016 EPRP
နိုင်ငံရေးပါတီများသည် ယနေ့ခေတ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်များ၏ အခရာပင်ဖြစ်သည်။လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံအများစုတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများသည် နိုင်ငံရေးသဘောသဘာဝ၏သိသာထင်ရှား ဆုံးသော လက္ခဏာရပ် ဖြစ်သည်။ Other chapters of “ Introduction to Politics” .
နိုင်ငံရေး မိတ်ဆက်နိဒါန်း ၁၂။ ဖိအားပေးအုပ်စုများ
ဇူလိုငျ 4, 2016 EPRP
ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းများရှိ အာဏာဗဟိုအချက်အခြာဖြစ်သောအစိုးရများအပါအ၀င် မည်သည့် လူ့အဖွဲ့ အစည်းများတွင်မဆို အာဏာကိုင်စွဲထားသူများသည် တောင်းဆိုမှုအား အဓိကထားရလေ့ရှိ သည်။အဆိုပါ တောင်းဆိုမှုများသည် များစွာသောရင်းမြစ်များမှပေါ်လာနိူင်သလို ပုံသဏ္ဍန်မှာလည်း အမျိုးမျိုး ဖြစ်သည်။ Other chapters of “ Introduction to Politics” .
စကျတငျဘာ 21, 2015
EPRP နားထောင်ကြားနာရေးစီမံချက်သည်နားထောင်ကြားနာရေးအနုပညာနှင့်စွမ်းပကားကို အသုံးချရန်ကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ်ပြီးကာလအတန်ကြာ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့ရသောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု များ ၎င်းတို့၏ဘ၀များ၊အတွေ့အကြုံများပြောဆိုလာစေရန်နှင့် ဝေမျှပေးရန်တွန်းအားပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ထိုသို့ပြောဆိုမျှဝေပေးခြင်းသည် ၎င်းတို့အားပိုမိုအားရှိလာစေပြီးထိုအချက်အလက် များအား ဝေမျှပေးခြင်းဖြင့် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကိုလည်း ပိုမိုအားကောင်းလာစေပါသည်။ EPRP ၏အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်သော နားထောင်ကြားနာရေးအစီအစဉ်ကို အကောင်အ ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယခုထုတ်ဝေမှုအား ပါဝါနှင့်နားထောင်ကြားနာရေးအနုပညာနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံများ၏ သင်တန်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ဖန်တီးထားပါသည်။ ယခုထုတ်ဝေမှုသည် Ethnic Peace Resources Project (EPRP) ကျားမဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာအကြံ ပေးပုဂ္ဂိုလ် ဒေါက်တာ ခင်မာမာကြည်၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖြစ်ပြီး EPRP ၀န်ထမ်းများကထုတ်လုပ် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။သရုပ်ဖော်ရေးဆွဲသူမှာ အာကာ ဖြစ်သည်။
ဇှနျ 7, 2015 EPRP
ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများအကြောင်း နိုင်ငံရေးမိတ်ဆက်နိဒါန်း နောက်ဆုံးတင်လွှင့် သည့် မှတ်စုနှစ်ခု ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးမိတ်ဆက်နိဒါန်းသည် ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်EPRP တို့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လာသူများ၏ တောင်းဆိုချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသောအား ဖြင့် ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာအလန်စမစ် ပြင်ဆင်ပြုစုခဲ့သော စာတမ်းတွဲများဖြစ်သည်။နိုင်ငံရေးအကြောင်း နားလည်စေရန်နှင့် တွေးခေါ်နိုင်စေရန်အတွက် ပြုစု ထားသည်။စာတမ်းတခုချင်းစီသည် အတိုချုပ်ဖော်ပြချက်များဖြစ်ပြီး နားလည်လွယ်စေမည့်နည်းလမ်း ဖြင့် အသုံးဝင်သော အချက်အလက်များဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆက်ဆံရေးရုံးများ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ
မတျ 12, 2015 EPRP
ယခုစာတမ်းကို ၂၀၁၅ ဖေဖေါ်ဝါရီတွင်ရေးသားခဲ့ပြီးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆက်ဆံရေးရုံးများ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှင်းပြထားသည်။EPRP နှင့် မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးအထောက် အကူပြုအဖွဲ့ (MPSI )တို့၏ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။